डोमेन परिवर्तन भएमा एसईओ मा मेरो प्रगति कसरी बचत गर्ने?
डोमेन नाम परिवर्तन गर्ने राम्रो तरिकाले निर्णय एक ठूलो हो, निश्चितको लागि. तर साधारण रूपमा निष्पक्ष विचलन थिच्नका लागी बजेट कार्यान्वयन को लागी पूर्ण कार्यान्वयन पुन: प्राप्ति को लागी उडान गर्ने, हामीमध्ये धेरै निराश हुन सक्छौं।.
एसईओ परिवर्तन पछि डोमेन को लागी सबै भन्दा यथार्थवादी परिणामहरुमा, जैविक यातायात को अस्थायी हानि हो. यस्तो क्षति सामान्यतया 5-20% मा मापन गरिन्छ र वेबसाईकल ट्राफिकको लागी अपेक्षा गरिएको छ, कम से कम 3-4 हप्ता सम्म प्रारम्भिक अवधि मार्फत Google लाई सामान्य URL को नयाँ URL हरु पढ्न को लागी रोकिन्छ। रिडिरेक्ट्स वा कुनै अन्य बन्द पृष्ठ अद्यावधिकहरू. सबैभन्दा पहिला, शांत महसुस गर्छ, किनकि यो समय फ्रेम निश्चित रूपमा तपाईंको हानि क्षतिपूर्ति गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ. त्यस तरिकाले, म तपाईंको व्यवसाय ब्रान्ड नाममा लक्षित पीपीसी अभियानको साथै आवेदनको लागि लागी मुख्य गैर-ब्रांडेड वस्तुहरूको लागी आवेदनको लागि सिफारिस गर्दछु।.
प्राय: सामान्यतया, वेबमास्टर्स र वेब विकासकर्ताहरूको शेरको अंश थेरेपी कार्य पछि लाग्न थाल्नेछ, एसईओ एकपटक पुनःप्राप्ति सुरु गर्न र डोमेन कार्यहरू परिवर्तन गर्न सक्नु हुनेछ।. तर तपाईले पनि एक कदम अगाडी बढाउनु हुनेछ. मेरा मतलब छ कि तपाईं केहि प्रारम्भिक कामहरु को लागी Google को मदद गर्न को लागी तपाईंको सबै भन्दा राम्रो काम गर्न को लागी जा सकते हो, साथ ही केहि खोज इन्जिनहरु को लागी, के गर्ने को बारे मा बेहतर समझ र पर्याप्त रूप देखि प्रतिक्रिया. त्यसोभए, तपाईं आफ्नो प्रगति एसईओ परिवर्तन परिवर्तन डोमेनमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसको वरिपरी सबै गहिरो एक सहज प्रक्रियामा. म आफैलाई मालिकको जस्तै महसुस गर्दछु, केवल यी सक्रिय कदमहरू निम्नसँग:
अन्य उच्च डोमेन प्राधिकरण वेबसाइटहरूमा आधारित तपाईंको लिङ्कहरू पुनर्निर्माण गर्ने एक शानदार विचार हो।. जब तपाइँ इन्टरनेटमा आफ्नो हालको ब्याकलिङ्कहरू अद्यावधिक र पुनर्निर्माण गर्दै व्यस्त हुनुहुन्छ, डोमेनलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक महसुस गर्नुहोस् केही महान नयाँ अवसरोंको रूपमा. मेरा मतलब तपाईं डोमेन सजिलै पछि हप्ताको माध्यमबाट थप ताजा ब्याकलिङ्कहरू bulti सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ. यसो गर्दा, तपाईं Google लाई थप सही र उपयोगी संकेतहरू पठाउनुहुनेछ. र त्यो सबै पछि SERP हरूमा उच्च रैंकिंग संग सम्मानित हुनेछ.
नयाँ URLs संग पुनः पुरानो पुरानो ब्याकलिङ्कहरूको लागि फिर्ता नबिर्सन. यहाँ मूल विचार भनेको एकै समयमा डोमेनमा पुन: निर्देशित गणना घटाउने बेलामा गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरूको पूर्ण सेट फिर्ता पाउनका लागि हो।. गरिरहनु, इन्टरनेटमा क्रल एक विशेष उपकरण प्रयोग गरेर (म आधामा निर्भर गर्न प्रयोग गरें), बलियो अख्तियारको साथ तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू फेला पार्नुहोस्. एक पटक तिनीहरू बसेपछि, तिनीहरू सबैको लागि अपडेट अनुरोध गर्न ईमेल प्रयोग गरेर एक प्रयास प्रयास गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्.
अन्तिममा, सामाजिक मिडिया च्यानलहरूको माध्यमबाट तपाईंको नयाँ डोमेन नामको लागि पदोन्नति बनाउन नबिर्सनुहोस्. त्यस तरिका, सबैभन्दा लोकप्रिय र सम्बन्धित ढाँचाहरूमा तपाईको वेबसाइट URL र धेरै व्यवसाय ब्रान्ड नाम (यदि लागू भए) अपडेट गर्न सुरु गर्नुहोस्. साथै, तपाईंको केहि सोशल मिडिया च्यानलहरूमा घटनाको लागि डोमेन परिवर्तन घोषणा गर्न यो एक राम्रो विचार हो. यसले तपाईंलाई दर्शकहरूलाई सूचित गर्न मद्दत गर्नेछ कि तपाईको डोमेन मात्र परिवर्तन हुँदैछ, तर तपाईंको उत्पादन वा सेवाहरूको उच्च मूल्यहरू वही पनि हुनेछन्। Source .